musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Russian Sputnik V yekudzivirira ikozvino yatenderwa kupinda muIsrael
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Zviremera zveIsrael zvakapa mvumo yekupinda kwevanhu vakabaiwa neSputnik V COVID-19 vaccine.
Sputnik V vanhu vakavharirwa vanogona kushanyira nyika dzinosvika makumi matatu neimwe pasina imwe yekuwedzera chibvumirano cheCOVID-31.
Negative PCR kana positive antibody bvunzo pakupinda wedzera izvi nedzimwe nyika makumi mashanu.
Kuvharirwa kunosungirwa kunodiwa mune dzimwe nyika makumi maviri.
Sangano reRussian Direct Investment Fund (RDIF, homwe yehupfumi yeRussia) inozivisa kuti zviremera zveIsrael zvakapa mvumo yekupinda kwevanhu vakabaiwa nechirwere ichi. Sputnik V Mushonga unobetsera kudzivirira covid19.
Zvinodiwa zvakakosha zvenyika dzinobvumidza kushanya kunotevera Sputnik V vaccination*:
Negative PCR kana positive antibody bvunzo pakupinda wedzera izvi nedzimwe nyika makumi mashanu;
Nyika gumi neshanu chete dzinoda majekiseni kunze Sputnik V. Nyika shanu chete dzenyika idzi, kusanganisira US, dzinovimba zvizere chete neiyo World Health Organisation (WHO)Rondedzero yakatenderwa yemishonga.
* Visa uye (kana) imwe mvumo yekupinda inodiwa, Munhu anofanirawo kusangana nezvimwe zvinodiwa zvisingaenderane nezvinorambidzwa coronavirus. Kuongororwa kwemikana yekupinda kunoenderana nezvinodiwa kune huwandu hwenyika zhinji, uye zvinogona kusaratidza zvirambidzo kana kuregeredza kuri kushanda kune dzimwe nyika dzakasarudzwa kana mamwe mapoka. Nyika makumi maviri nenomwe dzichine miganhu yakavharirwa vashanyi vanobva kune dzimwe nyika zhinji.